မက္ကဆီကိုနှင့်၎င်း၏ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်စက်ရုံသစ် | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
Adriana | | စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း, ဇီဝလောင်စာ, Microcogeneration
ဒါဟာ Veracruz အတွက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်, မက္ကစီကို သစ်တစ်ခု ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင် cogeneration စက်ရုံ။ ဤပွဲတွင်သမ္မတCalderónတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဤကုမ္ပဏီအမျိုးအစားအတွက်အရေးကြီးပုံကိုပြသည်။
ဒီစက်ရုံစတင်တည်ထောင်ချိန်ကတန်ချိန် ၃ ဒသမ ၆ သန်းကျော်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် နှစ်စဉ်။ ဒီကိန်းဂဏန်းကကားအစီးရေ ၇၀၀၀၀ ကိုလည်ပတ်ရာမှဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ညီမျှသည်။
ဤ ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်စက်ရုံ ၎င်းသည်ကုန်ကြမ်းဖြစ်သောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်သောတီထွင်မှုအတွက်တီထွင်မှုအတွက်ဆုကိုအမျိုးသားအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည် ကြံ bagasse အလုပ်လုပ်ရန်
ဒီစက်ရုံမှထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင် တစ်နာရီ ၁၄ ဆင့်ရှိတဲ့ kwaw တစ်နာရီပေးပြီးကတည်းကယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာပါ သမားရိုးကျထက်လျော့နည်း။
Cogeneration တစ်ခုဖြစ်သည် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ မက္ကစီကိုကိုအမြတ်ထုတ်ရန်နောက်ထပ်ဘာလဲ။ ထို့ကြောင့်အလားတူစီမံကိန်း ၃၀ မှ ၄၀ အကြားတည်ရှိမှုကိုထင်ဟပ်သည့်သိသာထင်ရှားသည့်နိုင်ငံတော်အထောက်အပံ့ရှိပါသည်။
မက္ကစီကိုသည်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများပေါ် မူတည်၍ ရပ်တန့်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်ကိုလျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။
မက္ကစီကို၏ကျန်နိုင်ငံများကဲ့သို့ တောင်အမေရိက ၎င်းတို့တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များကိုအမြတ်ထုတ်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်နိုင်ချေများရှိသော်လည်းသူတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာမပြည့်စုံသေးပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ခန့်ကအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည် သန့်ရှင်းသောနည်းပညာများ အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု နှင့်စွမ်းအင်။
ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင် သက်ဆိုင်ရာအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်သည် လောင်စာနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံ၏စည်းကမ်းချက်များ၌။
ထို့ကြောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆက်၍ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရန်အရေးကြီးသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျသောနိုင်ငံများအနေဖြင့်၎င်းသည်အလယ်အလတ်နှင့်ရေရှည်တွင်သူတို့၏လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးအခြေအနေများကိုတိုးတက်အောင်ကူညီလိမ့်မည်။ သိသိသာသာလျှော့ချရန်အပြင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု.
အရင်းအမြစ်: CNN ကိုတိုးချဲ့
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » ဇီဝလောင်စာ » မက္ကဆီကိုနှင့်၎င်း၏ဇီဝလောင်စာစွမ်းအင်စက်ရုံသစ်
Jorge Zent ဟုသူကပြောသည်
ကုမ္ပဏီနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ အများပြည်သူကိုရောင်းပါသလား နှစ်ခုဖြန့်ဖြူး?
Jorge Zent သို့စာပြန်ပါ